Opinion – My Life Magazine
आइदा अबादपौर, जर्मनी नेपालको सगरमाथाले गर्दा ‘नेपाल’ शब्द सँगै यसको उचाई जोडिन्छ । मैले न्यानो मन भएका मानिसहरु र उनीहरुका सहयोगी हातको स्पर्ष नेपाल प्रवेश गर्दै गर्दा नै महसुस गरे र मेरो लागि उमंंगको ढोका…
पाँच महिनामा कति विदेशीले नेपाल यात्रा गरे?
TravelersJuly 5, 2018
सन् २०१८ को पहिलो पाँच महिनामा साढे चार लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्।अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार जनवरीदेखि मेसम्म ४ लाख ५४ हजार विदेशीहरुले नेपालको यात्रा गरेका छन्। पछिल्लो महिना भारतीय पर्यटकहरु अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशतले…
TravelersJuly 1, 2018
अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपाल चिनाउन सगरमाथा र लुम्बिनी नै काफी छ । यद्यपि ठमेल, पोखरा र चितवनको जंगल सफारीले पनि धेरै हदसम्म नेपाललाई विश्व बजारमा चिनाएको छ । र, लामो समयदेखि यी सीमित गन्तव्य मात्रै नेपाल प्रवद्र्धनको…
महिला सिट: निल्नु न ओकल्नु !
प्रज्ञा पोख्रेल अरु दिन झै बिहान सबेरै उठेर बाथरुम गए, शरीरमा केही असजिलो आभास भइरहेको थियो। अलि बेर पछि नियालेर हेर्दा कुर्थाको पछिल्लो भागमा लागेको गाढा रातो धब्बा देखा पर्यो साथै महसुस भयो शारीरिक पीडा।…